प्रचण्ड-नेपाल पक्षको प्रदर्शन : भेला हुँदै कार्यकर्ता, मनलाग्दो नारा लगाउन नपाइने ! « Lokpath
२०७७, ९ माघ शुक्रवार ११:०६
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको प्रदर्शन : भेला हुँदै कार्यकर्ता, मनलाग्दो नारा लगाउन नपाइने !
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ माघ शुक्रवार ११:०६
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आज काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।
विरोध प्रदर्शनका लागि प्रचण्ड – नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता आन्दोलन कार्यक्रमका लागि भेला हुन थालेका छन् । यसैकारण काठमाडौंको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । विभिन्न स्थानका सवारी रुट डाईभर्सन गरिएको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आज बिहान ११ बजे काठमाडौंका विभिन्न १० स्थानबाट जुलुस निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्न लागेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन र सभाको कार्यतालिका र जुलुसलाई मर्यादित बनाउनका लागि निर्धारित नारा मात्र लगाउनुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।
विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न युवा, विद्यार्थी, मजदुर र खेलकुद मोर्चाका दुई हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले लोकपथसँग बताए । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री र राष्टपतिविरुद्ध अमार्यादित नारा लगाएर आलोचित बन्न पुगेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यसपटक सो गल्ती हुन नदिन सभालाई पनि व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको छ । संयोजक श्रेष्ठले थपे, ‘विरोध प्रदर्शन र सभा मर्यादीत बनाउनका लागि बुधबार सात बुँदे निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ ।’
संघर्ष समितिले पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठन, मोर्चालगायत सांगठनिक संरचनाहरूलाई सभामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजित विभिन्न स्थानबाट नेता तथा कार्यकर्ता काठमाडौं आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको मिति तोकेपछि प्रचण्ड – नेपाल समूहले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । प्रचण्ड पक्षले आजको विरोध सभा सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रचण्ड पक्षले पौने ११ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा भेला भइसक्नुपर्ने बताएको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरूलाई विभिन्न ‘आर्क’ तोकिएको छ ।
जसअनुसार माइतीघर, डिल्लीबजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, प्रदर्शनीमार्ग, शान्टिबाटिका, त्रिचन्द्र कलेज, बाल्मिकी कलेज क्षेत्रमा भेला हुन भनिएको छ।
रत्नपार्कमा शुक्रबार हुने विरोधसभामा काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाका जनसमुदायको सहभागिता हुने नेकपाले विश्वास लिएको छ ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले नेकपाको कुन पक्षलाई
‘प्रजातन्त्र जोगाउन राजसंस्था’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले प्रजातन्त्र जोगाउन राजसंस्था र
धाकधम्की दिई चन्दा माग्ने विप्लव समूहका तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द समूहका सप्तरी जनसत्ता प्रमुखसहित तीन कार्यकर्तालाई सप्तरी प्रहरीले आज